Guddiga madaxa-banaan ee xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya oo sheegay in ay socdaan baaritaano ay ku hubinayaan dacwado ku saabsan doorashooyinka aqalka hoose - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaGuddiga madaxa-banaan ee xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya oo sheegay in ay socdaan baaritaano ay ku hubinayaan dacwado ku saabsan doorashooyinka aqalka hoose
Guddiga madaxa-banaan ee xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya oo sheegay in ay socdaan baaritaano ay ku hubinayaan dacwado ku saabsan doorashooyinka aqalka hoose
November 27, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Guddiga madaxa-banaan ee xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya. [Sawirka: snapshoot]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Guddiga madaxa-banaan ee xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in guddiga uu baarayo dacwado ku saabsan doorashooyinka dalka ka socda.
“GMXKHDD waxaa u ku wargalinayaa dhamaan inta ay khuseyso dacwadaha aan gacanta ku heyno, in Guddigu uusan weli dacwadahaas go’aan ka gaarin. Muddo dhaw wuxuu Guddiga MXKHDD wuxuu bilaabayaa dhageysiga dacwadaha, dhinac walibana waxaan siineynaa fursad uu isku difaaco,” ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay guddiga.
Guddiga ayaa sidoo kale sheegay in ay baari doonaan dacwadaha ku saabsan qoondada haweenka ee 30% oo lagu go’aamiyay shirkii madasha qaran ee hoggaamiyaasha siyaasada Soomaaliya.
“Arrimaha la xiriira Qoondada Haweenka ee 30% oo ay go’aamisay Madasha Hoggaanka Qaran, Guddiga MXKHDD waxa uu go’aan ka gaarayaa dacwadaha ay soo gudbiyaan Musharrixiinta Dumarka ah oo kaliya.” Ayaa lagu yiri bayaanka guddiga madaxa-banaan ee khilaafaadka.
Kiisas musuqmaasuq oo aad u weyn iyo cabsi gelin codeeyaha ayaa hareeyay doorashooyinka hadda socda ee baarlamaanka Soomaaliya, sida uu warbaahinta u sheegay hanti-dhowraha guud ee Soomaaliya, Janaraal Nuur Faarax Jimcaale.
Laaluush u dhaxeeya $1,000 – $5,000 ayaa la bixiyay, sida uu sheegay hanti-dhowraha guud ee Soomaaliya, Janaraal Nuur Faarax Jimcaale.
Warsidaha Puntland Mirror ayaa sidoo kale ogaaday in qaar kamid ah musharixiinta ay bixiyeen laaluush ka sareeya $1.3 milyan si ay cod u helaan.
Doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa soconayay ilaa iyo bishii lasoo dhaafay ee Oktoobar.
December 11, 2016 Tirada dhimashada oo gaartay 30 qof kadib qarax gaari oo ka dhacay banaanka hore ee dekada weyn ee Muqdisho
October 16, 2017 Tirada dhimashada qaraxii Muqdisho oo gaartay 276 qof
October 19, 2016 Tirada dhimashada weerarkii Al-Shabaab ee magaalada Afgooye oo gaartay 15 qof
February 10, 2017 Puntland oo koonfurta Soomaaliya dib ugu celisay in ka badan 30 tahriibayaal ah oo kusii jeeday Yeman
Somali fashion designer elected as lower house member
The U.S. military says it has conducted an airstrike targeting an al-Shabaab militant in the vicinity of Qunyo Barrow, Somalia, killing a militant. In a statement, U.S. Africa Command says the airstrike was carried out [...]
Qardho-(Puntland Mirror) Boqolaal reer guuraa ah ayaa wali kusii socda deegaanada hoostaga degmada Bender Bayla ee gobolka Karkaar halkaas oo dhawaan roobab ka da’een, sida ay wararku sheegayaan. Asbuucyadii lasoo dhaafay ayaa deegaanada miyiga Dhuudo [...]